← Lacag Dhan 5.4 Billion Oo Loogu Yaboohay GAZA
Muuska Oo Kaalin Mug Leh Ka Qaata Caafimaadka Maskaxda Iyo Jidhkaba. →
(SLT-Haigue)-Waxaa aad loo aaminsanyahay in Radovan Karadzic ay caawiyeen shakhsiyaad ka tirsanaa dawladii dalka Serbia ee awooda joogay si uu uga baxsado in uu gacanta u galo maxkamada caalamiga ah ee dunida oo iyadu dacwad ku soo oogtahay xiligii Serbia Madaxweynaha uu ka ahaa Sloban Milisovic oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Radovan Karadzic.
Radovan Karadzic waxa uu gebi ahaanba galay nolol cusub oo casri ah isaga oo bedelay muuqaalkiisa, waxaa sidoo kale uu bilaabay in uu ka shaqeeyo arimaha la xidhiidha daweynta dadka lugu daweeyo dawo dhaqameedka iyo sidoo kale in uu ka qaybgalo munaasabadaha la xidhiidha caafimaadka ,dhaqanka iyo dhalinyarada oo uu ka mid ahaa dadka sida weyn uga dhex muuqda.
Dr Dragan Dabic oo ahaa magaca uu la baxay Radovan Karadzic ayaa noqday qof si weyn loogu yaqaanay cilmi nafsiga oo dadku ay si weyn u jeclaayeen, waxaana uu si weyn kaga dhexmuuqday arimaha la xidhiidha horumarinta dhalinyarada iyo sidoo kale xafladaha lagaga hadlayay cilmi nafsiga isaga oo aan la garananeynin aqoontiisa iyo halka uu ku bartay cilmi nafsiga laakiin dadku waxay ka aamineen in uu yahay khabiir si weyn ugu xeeldheer arimaha cilmi nafsiga.
Dragan Dabic ayaa iska dhaadhiciyay dadka ku noolaa Belgrade isaga oo u sheegay in uu yahay khabiir ku xeeldheer daawo dhaqameedka iyo cilmi nafsiga , waxaana uu ku biiray gudi dadka u sheega in daawo dhaqameedka oo la isku daweeyaa ay wanaagsantahay in la adeegsado dawooyinka caadiga ah ee warshaduhu soo saaraan.
Dabic waxa uu dadaal badan geliyay sidii dadku ay ugu aqoonsanlahaayeen khabiir weyn oo laga danbeeyo taas oo uu ugu danbeyntii ku guuleystay isaga oo ka mid ahaa dadka sida weyn loogu soo doonan jiray dawo dhaqameedka iyo daaweynta la xidhiidha maskaxda , isaga oo ugu danbeyntii furtay shabakad isaga u gaar ah oo uu ku baahin jiray daweyntiisa halkaas oo ay dadku kala soo xidhiidhi jireen.
Radovan Karadzic ayaa isagu ka qaybgeli jiray xaflad kasta si uu u ogaado dadkii hore u yaqaanay ka hor inta aanuu noqonin Dr Dragan Dabic in ay aqoonsan karaan iyo inkale , waxa uu markasta eegi jiray dadka si uu ogaado hadii ay aqoonsan karaan iyo hadii kale taas oo isaga ku dhiiri gelisay in uu sidii uu doono uu u socdo maadaama aanay cidi ogeyn in uu yahay Radovan Karadzic.
Radovan Karadzic waxa uu sidoo kale bilaabay in uu ka soo muuqdo tvyada isaga oo wax laga weydiin jiray arimaha la xidhiidha cilmi nafsiga iyo dawo dhaqameedka.
Isaga oo Radovan Karadzic la hadlaya telefishinka Al-jazeera waxa uu ka sheekeeyay sida fudud ee uu awooda ugu yeeshay in uu iska dhigo qof kale : “ Anoo ah Dr Dabic maan sameynin waxa Radovan Karadzic aanuu sameeyeen.
Maadaama Radovan Karadzic uu ahaa dhakhtar yaqaanay dawooyinka dhirta, keliya magaca Dabic waxaan si dhab ah ugu shaqeeyay cilmigaa uu yaqaanay Karadzic kaas oo deegankaa laga yaqaanay sanado farabadan.
Waxaan aaminsanahay in labada nooc ee dawooyinku in ay yihiin kuwo isku mid ah oo ay wanaagsantahay in meel la isugu keeno, ma jirto sabab looga guuro dhaqamadii hore .
Dhabtii Dr Dabic waxa uu ahaa Radovan Karadzic iyada oo Radovan Karadzic-na uu noqday Dr Dabic” sidaa waxaa yidhi Radovan Karadzic.
Dr Dabic ayaa isagu wakhtiyada uu ku jiray dhuumashada tegi jiray baar inyar u jiray gurigii uu ku nolaa halkaasoo ay ku xardhanaayeen qaar ka mid ahaa sawiradiisii xiligii uu ahaa Radovan Karadzic, iyada oo dadka baarka leh ay taageersanaayeen hadana Dr Dabic marnaba isu muu sheegin in uu yahay Radovan Karadzic, laakiin waxaa markasta la arki jiray isaga oo daawanaya sawiradiisii hore oo iyagu ku dhegenaa baarkan uu tegi jiray.
“Waxaa jirta maah maah odhaneysa qofkasta oo ka baqanaya in uu dhinto , waxaa uu wajahaa tiro badan dhimashooyin ah, sidaa darteed anigu waan noolaaday weli ma dhiman” sidaa waxaa yidhi Radovan Karadzic.
Ciidamada aamaanka ee dalka Serbiya ayaa bilaabay in ay dabagal ku sameeyaan Dr Dabic ka dib markii ay dhegeysteen tilifoonkiisa, waxaana wixii wakhtigaasi ka danbeeyay ay bilaabeen in dabagal 24 saacadood ah ay ku sameeyaan Dr Dabic taas oo markii ugu danbeysay ay ku xaqiiqsadeen in uu yahay Radovan Karadzic.
Waxay ogaadeen in uu yahay Radovan Karadzic markii ay gadhka ka xiireen, taas oo arin farxad weyn u ahayd dadka Reer Bosnia ee uu Karadzic uu xasuuqa u geystay inkasta oo dhinaca kale ay qabashadiisa si weyn uga soo horjeedsadeen dadka Reer Bosnia ee ku noola magaalada Belgrade oo u arkayay in uu ahaa geesi weyn oo ay lahaayeen Seerbiyiintu.
Radovan Karadzic ayaa weli maxkamadeyntiisu ay ka socotaa maxkamada caalamiga ah ee dunida ee xaruunteedu ku taalo magaalada Haigue, waxaana loo haystaa danbiyo ka dhan biniaadanimada oo ay ka midyihiin xasuuq iyo isir sifeyn.